किन पुगे राष्ट्रपति भेट्न शीतलनिवास प्रधानमन्त्री ओली ? - Maxon Khabar
Home / News / किन पुगे राष्ट्रपति भेट्न शीतलनिवास प्रधानमन्त्री ओली ?
किन पुगे राष्ट्रपति भेट्न शीतलनिवास प्रधानमन्त्री ओली ?
नेकपा का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटघाट गरेका छन। सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सहभागी भएर ओली राष्ट्रपति भेट्न सिंहदरबारबाट राष्ट्रपति निवास शीतलनिवास पुगेका हुन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकको पछिल्लो अवस्थाबारे राष्ट्रपतिलाई अवगत गराउने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ । पछिल्लो समय सरकारविरुद्ध चौतर्फी आलोचना बढेका बेला प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति संगको भेटलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
राष्ट्रपति संवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुने व्यवस्था समेत रहेको छ । सरकार प्रमुखले नियमित कामका ब्रिफिङका साथै कुनै गम्भीर कदम चाल्नुअघि राष्ट्रपतिसँग परामर्श लिने चलन समेत रहेको छ । जानकारहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिनुअघि राष्ट्रपति भण्डारीसँग परामर्श गर्ने गरेका छन ।